Daybọchị Ọhụụ na-abịa n'oge adịghị anya ~ Emume Oge Mmiri adịghị erite - News - Zhongshan Xiangdi Lighting Co., Ltd.
Nwebisiinka: Zhongshan Xiangdi Lighting Co., Ltd. 粤 ICP 备 15039807 号Nkwado nka na ụzụ:do35 Mkpokọta webụsaịtị sitere na mba ofesi
Daybọchị mba na-abịa n’oge adịghị anya ~ Emume Ala Oge adịghị anya
Udu mmiri n'oge opupu ihe ubi, mmiri ozuzo n'oge okpomọkụ, malt n'oge mgbụsị akwụkwọ, mbido snow,
Oge mgbụsị akwụkwọ Ọlaedo October ... Oge 荏苒 ~ Oge Erimeri agaghị adị anya!
Ememe oge opupu ihe ubi adịghị anya. 2019 Afọ Ọhụrụ China bụ 2019 2 Month 5 Day, ụbọchị mbụ nke kalenda ọnwa, Tuesday. Ọnwa anọ fọdụrụ, anya nke anya na-abịa ~ you chebarala afọ a echiche ... Kedu agba ụbọ Oge opupu ihe dị gị n’obi? Ka anyị lebagodị anya n’ìhè n’afọ ndị gara aga Olee agba anyị nwere n’oge Ememme Oge opupu ihe ubi, oleekwa ụdị ọmarịcha foto anyị hapụrụ? ~~ 睁大 眼看 吧 ~
Longfeng Chengxiang - Qingcheng District Square
Ngụkọta ogologo nke 18 mita nke dragons na nku nke Phoenix mara mma gbara gburugburu Beijiang Pearl nke dragọn na Phoenix Chengxiang meriri ebe mbụ, jidere obi anyị nke ọma ozugbo
Nrọ Buru Eziokwu - Jiangbin Park Jiangxin Island
Ndi otu 10 na agwaetiti Jiangxin juputara n'echiche nke teknụzụ, na-eburu gị gafee ụwa gaa na ụwa!
Lucky Fortune maka Afọ Ọhụrụ - Feilaihu Square
Mkpo osisi ifuru kristal xNUMX mara mma dị oke mma, linti mara mma na nke mara mma agbaala ọ joyụ nke ọtụtụ ndị nne na nna, ha ewetakwala nwa ha mara mma n'oge lanterns, ya na Wangwangwang!
Gọọmentị District dị ọcha
Oriọna ndị nwere akụkụ atọ na-egosi ifuru ọhu, ọfụma na gburugburu ebe obibi nke nnụnụ na ifuru, ma nwetala otuto nke ndị agbata obi.
Mgbatị ahụ ọhụrụ
Isiokwu mgbakwunye mba ahụ jikọtara ya na mgbatị ahụ, ihe osise mara mma nwa bebi 2 mita dị elu yana ụdị ihe ọkpụkpụ mbụ, jikwa ọtụtụ mmasị mpaghara.
Narị narị atọ
Styzọ ije na oriri ọ bụ bụ na-agwakọta mbara ala 100-ụzọ iji mepụta ikuku Afọ Ọhụrụ, na-ewetara mpaghara ahụ amara nke afọ ahụ zuru oke.
Nnukwu Agba Ọdọ Mmiri Nnọ Mmiri
Ememe Afọ Ọhụrụ nke Afọ Ọhụrụ amachitere ọtụtụ iri puku ndị njem nlegharị anya.The lanterns in the iconic of Qingcheng and Qinghai, ndị mmadụ si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ nọ ebe niile!
Ememe Marina na-elekwasị anya na ikere na mmekọrịta, ijikọ ihe ọdịnala na nke ọhụụ iji mee ka ọtụtụ ndị na-eto eto sonye. Dabere na data ahụ, n'oge ihe omume ahụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-ekere òkè n'ihe omume na Guangdong dị elu dị ka 75%.
Ọnọdụ nke ubu nke ihe a, na-enwu n'abalị nke ememe ahụ, ghọrọ oke ọ joyụ. Afọ a na-eme kwa afọ bụ ihe atụ nke afọ ọhụụ nke Qingyuan, ọ bụkwa ọkaibe mara mma zoro ebe a. A na-eme oriọna ndị a na-eme kwa afọ dị ka a ga-asị na ha ga-eme ememme owuwe ihe ubi na agụụ maka ndụ ka mma, na-egosikwa ụdị pụrụ iche ndị mmadụ nwere.
N’oge na-adịghị anya site na Afọ Ọhụrụ ~ Zute obi ụtọ gị!
Ihu aja ala ọkụ aja aja n’etu ime ụlọ mma ụlọ ezumike mara mma ụbọchị ezumike mgbapụta osisi maple akwukwo ihe ngosipụta ọkụ na-eme ihe ngosi ogige n’èzí
Ihu aja ala ndi oria na –eme ka ogba eme ihe n’ile ndi n’enwe ihe ndoro-ndoro mmeghari
Ihu aja ala ndi oria na –eme ka ogha n ’ime ụlọ mara mma n’oge ezumike mara mma n’onwe ọkụ osisi simulation osisi ịme ngosi ọkụ na-egosipụta ebe a na-eme anwu ọkụ